Ubuhle bomfazi Iifake Eyelashes
Khumbula uSarazan Manzani, umculi we-makeup we-movie u-Evita, owathi inye kuphela into eyongezelelweyo engayi kuthintela kuyo i-eyelashes yakho? Ulibale nje ukuba wongezelela ukuba ngaphezu kwe-mascara, kukho enye indlela evivinywa yiinkwenkwezi zase-Hollywood - i-eyelashes ezingamanga.
Eyelashes amanga abe inombolo ye-accessory yeenkwenkwezi kwi-Red Carpet. Ukubonisa ukukhanya, ukukhanya, ukuhlutha, kunye neengqungquthela kwiziphelo-zongeza isitayela, ukugqithisa kunye nemfihlelo ekukhangeleni. Kodwa a baninzi abantu bayazi ukuba namhlanje le ncediso iya kuba yinto eqhubekayo imihla ngemihla, yemvelo, yemvelo. Eyelashes amanga ayaziwa, kuba Ezi zi-eyelashes ezifanelekileyo: zide, zihlukaniswe ngokucacileyo, zinqamle, zonke iintokazi ezithandayo ukuba nazo. Yaye ungayisebenzisa nawuphi na umcimbi.
Ngoko, endleleni eya ekufezekeni:
Yenza i-eye makeup rhoqo: isithunzi somso, i-mascara, i-eyeliner. Ukuba i-eyelashes yakho ilungile, bhinqa nge-eyelash. Eyelashes eziqhelekileyo zisoloko zinomfanekiso obomvu.
Inkqubo yokwenza i-gluing (ukusebenzisa) i-eyelashes yokufakelwa ixhomekeke kuhlobo lwayo. I-cilia eyahlukileyo okanye isiqwenga se-3-4 cilia sibeka phezu kwesikhumba sekhanda, esuka kwikona yangaphandle. Unako ukukhawulela "iintolo" ezimbalwa, kwaye unokuzibeka ngokufanayo kwi-line eyelashes. Ukwenza oku, unqamle i-glue ekhethekileyo ngaphandle kwetende (apho sivame ukuvavanya umbala we-lipstick) kwaye uthobe ngobumnene isiseko se-eyelash okanye i-fail ("postiche") kuyo. Ngama-eyelashes amanga aqhubekayo, iglue isetyenziswe ngokufanelekileyo kwisiseko ngokwawo ngamaconsi ambalwa. Qaphela xa usebenzisa iglue; ingangena emehlweni akho kwaye ibangele ukucasula.
Ukufakela i-eyelashes yokufakelwa into eyenzekayo ngeendlela zokuqhafaza, ukukhangela okhethekileyo nge-eyelashes okanye ukumane ucinezele ngomunwe.
I-cilia eyahlukileyo okanye i-eyelashes isetyenziswe kwicala langaphandle kwikona yamehlo, ngokusondele kumgca we-eyelashes yemvelo, kwaye ucinezele ngomunwe kumasekhondi ambalwa. Umsebenzi unokuphindwaphindwa, kodwa ushiye ubuncinci be-millimeter phakathi kwe-cilia, ngoko baya kubonakala bekhangeleka kakhulu. Eyelashes ezingamasiko eziqhelekileyo, emva kokufaka amaconsi ambalwa e-glue, acinezelwe phezu kweeyile ephezulu kuqala phakathi kwesikhoselo esiphambili, ngoko ahlanjululwa ngaphandle kwamacandelo angaphandle nangaphakathi. Ukuba itheyipu yeeyile edibeneyo ide kunokuba uyayidinga, yinqumle ngesibindi nge-crack manicure.
4. Umgca wokugqibela
Emva kweefowuni ezingamanga zifumanise indawo yazo, linda ixesha elifutshane, qhafaza ukuqinisekisa ukuba akukho nto ikuthintelayo. Emva koko upende umgca wesibini we-mascara kunye ne-eyelashes engokwemveli kunye neyobugcisa kunye, ukucoceka kakuhle kwisiseko. Ungasebenzisa nayiphi na i-mascara, kodwa kuya kuba yinto enokuthi i-mascara ifuthe. Ungayisebenzisi umbala ochaseneyo we-carcass ngokubhekiselele kwi-eyelashes yobuxoki! Ukuba i-eyelashes ibumnyama, akunakuncedo ukuyipenda nge-ink inkini. Kodwa i-eyelashes ebomvu okanye ebomvu ingaba yicwecwe ngeenkingi ezimnyama ngobusuku omnye, oko kuya kuhlamba.
Ngaphambi kokusetyenziswa, "ukufudumala" iintambo zakho zobuxoki kwiintendelezo, umzekelo, ujikeleze umgca wenkomfa uze ufake intendelezo yesinye icala. Oku kuya kubavumela ukuba babe nokuguquguquka, ukuxhuma, kungcono ukuphinda umjikelezo weso lakho xa usebenzisa, kwaye ugoba, uhambelana nomlo weentloko zakho.
Ukuba ufuna ukunciphisa iqela le-eyelashes yokufakelwa, qhafaza kuqala kwiso, uqala ukusuka kwikona yangaphandle, kwaye ucoce ngokukhawuleza izikrini zomntu ezivela ngaphakathi, kuba i-cilia ihlala ikhona i-fluffier kwaye ihlala ekhoneni elingaphandle kweso.
Ngaphambi kokuba ulale, qalisa inkqubo yokuhlamba kunye nokususwa kweefowuni ezingamanga, kwaye ke ususe kuphela i-makeup. Geza ii-eyelashes ngamanzi ngaphandle kokusebenzisa isepha, okanye ukuba usebenzisa i-mascara engenawo amanzi, kunye ne-PH-neutral soap. Oku kuya kukuvumela ukuba usebenzise amaxesha angama-5.
Ukuze ufezekise umphumo wendalo kunye nemivimbo emifutshane yemvelo, thengisa isethi yeelesi ephantsi - zifutshane ngaphezu kwee-eyelashes eziphezulu kunye neengcongolo ezingaphezulu.
Eyelashes ezingamanga zisinika i-chic, ubukeka obunzulu kwaye ngokukhawuleza ukuzisebenzisa ukusebenzisa i-liner enkulu yokupenda umgca phakathi kwe-eyelashes yendalo kunye neyakhe. Kodwa i-eyeliner, njenge-eyelashes, ingaba yimpunga, ibomvu, i-blue, eyenza umfanekiso ufumaneke ngokwendalo nangemini. Kwaye xa usebenzisa i-eyelashes ye-ultralight "I-Patrinal Flare" esuka kuM.A.S. unokushiya ngokupheleleyo i-liner. Kwakhona, umfanekiso wakho uza kwenza u-Eyelach unamathele kwi-eyelash glue kwi-Make Up For ever transparent, okuyiyo xa kunzima ukuba mnyama kwaye kungabi manzi xa ugibela echibini okanye elwandle ngaphantsi kwelanga.
E-Paris nakwiNew York, "i-eyelashes eyongeziweyo" isanda kakhulu. Ayikho nkwenkwezi enye yeerandi, umzekelo, njenge-"Desperate Houseways" ayikwazi ukwenza ngaphandle kwesi siqhelo. Akumangalisi, kuba I-teknoloji entsha yenza i-eyelashes ibe yinto ende, iyenzileyo, kwaye ibaluleke kakhulu engabonakaliyo kwizinto zendalo! Ngaloo "isipho sendalo" kwaye i-mascara ingahlala ngaphandle kokusetyenziswa. Kwaye kubaluleke kakhulu - akudingeki ukuba isuswe kwaye isetyenziswe rhoqo kwakhona.
Ukuze senze oku, asiyisebenzisi i-tape eyaziwayo kunye ne-cilia okanye kwintambo ye-eyelashes, kodwa iifayile ezikhethekileyo ezihambelanayo zifana ne-eyelashes zendalo, enye enye iyahambelana neengcambu ze-eyelashes kwaye ayinakugqithisa ubude bayo bendalo igobile njengaleyo yeBambi, njengoko oku kuya kukwandisa ukuhlukana kwabo). Ezi "zandiso" ezinjalo ziwela ngokuthe ngqo kunye nemvelo, ngoko ixesha "lobomi" babo li malunga neveki ezi-3, emva koko kulungiswe ukulungiswa. Intengo yenkonzo enjalo eParis ihluka ukusuka kwi-195 ukuya kwi-295 yeeyure (ukusuka kwi-55 ukuya kwi-80 zama-euro nganye kwiseshoni yokulungiswa) kwaye kuxhomekeke kwinani leetayilisi ezisetyenzisiweyo (phakathi kwama-40 no-120 "i-cilia" ngeliso).
Indlela yokubuyisela iileyile emva kokwakha?
Yintoni omele uyayiyazi malunga nemascara?
I-mascara engcono kakhulu ye-eyelashes
Ngaba umonakalo we-mascara udilesi?
Mascara epheleleyo - konke kusezandleni zakho!
Vareniki nge-kottage cheese
I-Veal ifaka i-cheese
I-Caramel candies eneembewu zempompo
Iholide e-Spa ebusika eHungary
I-Psychology: njani ukunqoba ukwesaba kwakho?
Iiresi zokutya okukhawulezayo
Iqhamo leGrapefruit Ukutya okuvela eMadonna
UBeyonce uya kudutshulwa ngokuvuyisayo
Amakheke ngepininaki kunye nama-mushroom
Ukhulelwe njani uKeti Topuria "wenyuka" kwi-Astana kwi-Muz-TV
Iindlela eziza kunceda ukuxazulula ingxaki ngokulala